OMN: ODUU AMMA NU DHAQQABE /BREAKING NEWS – Kichuu
HomeAfaan OromooTVOMN: ODUU AMMA NU DHAQQABE /BREAKING NEWS
DU’AAN BOQACHUU GOOTA OROMOO KOL/ALIYYII CIRRII ILAALCHISUUN
Gootichi Oromoo Koloneel Haajii Aliyyii Cirrii, abbaan Dhoombir du’aan addunyaa tana irraa boqatan.
Gootichi Oromoo kun arra Sadaasa 11, 2017 ganama kana keessaa sa’aatii 1:30 irratti boqachuu isaanii. Koloneel Haajii Aliyyii Cirrii bara 1914 dhalatan. Gabrummaa sirnoota nafxanyaa ummata Oromoo irratti gegeeddaramuun cunqursaa turan balaaleffachuun, umrii isaanii 18 kaasee qabsoo diddaa gabrummaa eegaluun, bosonatti galuun injifannoo jajjabduu galmeessisaa turaniiru.
Aliyyi Cirriin umrii isaanii guutuu goota qabsoo keessatti dabarsanidha. Haa ta’uu malee dhibee isaan mudateen, hospitaalota gara garaatti yaalamaa turuun jijjiirama fidanis, yeroo dhiyoo asitti dhukkubni itti hammaatet ture. Hoospitaala Madda Walaabuutti wal’aansi taasifamaafii turuus lubbuu isaanii baraaruun hin danda’amne
Konoleel Aliyyii Cirrii umrii waggaa 96 isaaniitti boqatanii jiru. Koloneel Haajii Aliyyii Cirrii goota ummata Oromoo hundaa waan ta’aniif, du’a isaanitiin gaddi guddaan nutti dhagahamee jira. Maatii isaanii fi ummata Oromoo maraaf jajjabina hawwina. Isaanillee warra jannataa haa godhu.
Dhiirti gad jechuu barte firaaf ganzaba hin taatu
Godina Baalee Aanaa Dalloo Mannaa Ganda Barraaqitti Gaaga’amni Ummanni keenya keeysa jiru haalaan Jabaadha.
ሚሚ ስብሃቱ ተጋለጠች – ሳዲቅ አህመድ በቢቢኤን ሰበር ዜና ለቆታል:: Must listen!!